प्रादेशिक अस्पताल कोभिड-१९ बिरामीले भरियो, भेन्टिलेटर बिग्रिएपछि बिचल्ली – Khabar Patrika Np
प्रादेशिक अस्पताल कोभिड-१९ बिरामीले भरियो, भेन्टिलेटर बिग्रिएपछि बिचल्ली
प्रकाशित मिति: बिहिबार, बैशाख २३, २०७८ समय: १७:०५:०२
काठमाडौं । महोत्तरी मटिहानीकी एक महिलालाई कोरोना संक्रमण भएपछि जनकपुरधामस्थित प्रादेशिक अस्पतालमा रहेको कोभिड-१९ अस्पतालमा भर्ना गरियो । बुधबार दिउँसो भर्ना भएकी महिलाको स्वास्थ्य अवस्था नाजुक हुँदै जान थालेपछि उनलाई भेन्टिलेटरमा राखियो । तर उनलाई राखिएको केही घण्टा नबित्दै भेन्टिलेटर बिग्रियो ।
भेन्टिलेटरले नै काम गर्न छोडेपछि उनको स्वास्थ्य बिग्रिँदै गइरहेको छोराले बताए । उनले भेन्टिलेटरका लागि चिकित्सक समक्ष हारगुहार गर्दासमेत कुनै पहल नगरिएको गुनासो गरेका छन् । प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरधाममा ९ वटा भेन्टिलेटर रहेको कोभिड अस्पतालका संयोजक डा. जामुन सिंहले जानकारी दिए । जसमध्ये ५ वटा अस्पतालमा भर्ना भएका बिरामीहरुको उपचारका लागि प्रयोग गर्न सकिने र बाँकी ४ वटा ट्रान्सपोर्ट भेन्टिलेटर रहेको डा. सिंहले बताए ।
३ वटा भेन्टिलेटर पहिलेदेखि नै बिग्रिएको र एउटा यस वर्ष कोभिड अस्पताल सञ्चालनमा आएपछि बिग्रिएको उनको भनाइ छ । बाँकी रहेको एउटा भेन्टिलेटर समेत बिग्रेको छ । भेन्टिलेटर ठीक गर्ने बायो मेकानिकसँगको सम्झौता सकिएकाले भेन्टिलेटर ठीक पार्न समस्या भइरहेको डा. सिंहले बताए ।
यद्यपि भेन्टिलेटर ठीक गर्नका लागि पहल भइरहेको उनको भनाइ छ । कोभिड अस्पतालमा धनुषा र महोतरीका ३२ जना कोरोना संक्रमित भर्ना भएका छन् । प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट प्रमोद यादवले पुरानो भेन्टिलेटर बिग्रिएपछि प्रदेश सरकारबाट नयाँ भेन्टिलेटर माग गरिएको जानकारी दिए ।
मेसु यादवले प्रदेश सरकारबाट भेन्टिलेटर प्राप्त भएलगत्तै प्रयोगमा ल्याइने बताए । निजी अस्पतालहरुबाट प्रदेशिक कोभिड अस्पतालमा बिरामी आउने क्रम बढेकाले अस्पतालमाथि भार थपिएको मेसु यादवको भनाइ छ । उनका अनुसार प्रादेशिक कोभिड अस्पतालमा ६३ बेड तयारी अवस्थामा छन् । अस्पतालमा आईसीयू १२ र ४१ बेडमा अक्सिजन उपलब्ध छ ।